Mar walba kama hortagi kartid timaha kaa daadanaya marka ay da’daada sii korodho, laakiin waxaa jira daawada bidaarta oo daahin kara in tinta ay kaa wada daadato.
Ka hor inta aadan daawo soo iibsanin marka hore baro kuwa balanqaadka leh ee ka hortagi kara ama daweyn kara timaha kaa daadanaya.
Raga ay bidaarta gasho qaarkood waa dhaxal, waxaana ay saameyn ku yeelataa kala bar raga ay da’dooda ka sareyso 50 sanno jir.
Arimaha Bulshada waxa ay idiin soo gudbineysaa 17 sheey oo daawada bidaarta ah oo aad kala hadli karto dhaqtarkaaga si aad uga hortagto timaha kaa daadanaya:
1. Daawo dhakhtar uu qoro iyo mida farmashiga taala
Waxaa jira labo daawo oo ay hay’ada koontaroosha cuntada iyo dawooyinka ee Mareykanka ee loo yaqaano FDA ay ansixisay oo lagu daweeyo bidaarta raga gasha:
Minoxidil (Rogaine): Rogaine waxaad ka iibsan kartaa farmashiga caadiga ah, waa dawo dareere ah. Waxaad marineysaa madaxa labo jeer maalintii, waxa ay ka caawineysaa inay timo ku soo baxaan iyo inay ka hortagto timaha kaa daadanaya.
Finasteride (Propecia, Proscar): Daawadaan waa kaniini oo aad maalin walba qaadaneyso. Sida kaliya aad ku heli karto waa inuu dhakhtar kuu soo qoro.
Labada daawo waxay qaadan kartaa muddo sannad ah inaad natiijo ka aragto, waana inaad si joogta ah u qaadato si aad faa’idooyinkeeda u aragto.
2. Timaha oo la talaalo
Labo mooc ayaa ugu caansan oo timaha loo talaalo waxaana ay kala yihiin:
FUT waa nooca asaasiga ah. Waxa maqaar laga soo fiiqayaa qeybta danbe ee maqaarka madaxaaga ee timaha leh, waxaa maqaarka laga soo bixinayaa timaha oo lagu talaalayaa halka bidaarta ay ku taalo.
FUE waa mid aan loo baahneyn in maqaar la fiiro, si toos ah ayaa madaxa qeybta tinta leh looga soo siibayaa tinta waxaana lagu talaalayaa goobaha bidaarta ay ku taalo.
Waxaad maanka ku heysaa in timo talaalka loo arko qaliin, sidaasi darteed waa qaali waxayna noqon kartaa mid xanuun badan.
Sidoo halis qaar ayaa ka imaan karta sida caabur ama nabar muuqda goobta maqaarka laga fiiqay ama tinta laga siibay. Sidoo kale waxaad u baahnaaneysaa in ugu yaraan labo jeer la sameeyo talaalka si aad u hesho natiijada aad rabto.
3. Daawada Bidaarta ee Leysarka
Daaweynta leysarka waxaa loo adeegsadaa in lagu yareeyo bararka ku dhaca isha ay tinta ka soo baxdo ee u diida inay tinta dib u soo dhalato.
Baaris badan lagama sameynin haddii daaweynta leysarka ay wax ka tari karto bidaarta, laakiin daraasad la sameeyay 2016kii ayaa lagu sheegay in heer hoose oo daweynta leysarka ah (LLLT) inay tahay mid la adeegsan karo oo wax ka tari karta timaha ka daadanaya ragga. Baaris badan in lagu sameeyo ayaase loo baahan yahay.
4. Jooji sigaar cabista
Haddii aad sigaar cabe tahay, mlaha waad maqashay saameynta xun ee uu sigaarka ku yeelan karo sanbabaha. Laakiin ma ogtahay in sigaar cabista ay sidoo kale ka qeyb qaadan karto timaha oo daata iyo sidoo kale timaha oo ku cadaada iyadoo waqtigeeda la gaarin.
Baaris la sameeyay ayaa lagu ogaaday in xiriir uu ka dhaxeeyo sigaar cabista iyo timaha daata. Si aad uga hortagto timaha oo kaa daata waxaa fiican inaad joojiso sigaar cabista sida ugu macquulsan.
5. Madaxa oo la duugo ama la masaajeeyo
Duugista waa mid dareen fiican leh, laakiin waxa ay sidoo kale ka caawin kartaa dhibaatada timaha kaa daadanaya. Madaxa oo la duugo waxay keeneysaa in timaha ay dib u kacaan.
Baaris lagu sameeyay Japan, raga Japan ee caafimaadka qaba ee maalin walba afar daqiiqo maqaarka madaxa loo duugo waxa ay 24 isbuuc ka dib timahooda noqdeen kuwa xajmi leh.
6. Cunto isku dheelitiran
Inaad cunto cuno isku dheelitiran waxa tintaada ka dhigeysaa mid xaalada ugu fiican ku jirta. Waxaad hubisaa in raashiinka aad qaadato ay ku jiraan qudaarta noocyadeeda kala duwan, badarka noocyadiisa kala duwan, borotiin, waxaadna yareysaa cunista iyo cabida waxyaabaha macaan.
Qaar ka mid ah fatamiinada iyo macdanta laga helo xunta ayaa lala xiriiriyay timo caafimaad qaba.
Isku day inaad qaadato cuntooyinkaan:
cuntooyinka hodanka ku ah birta (iron) sida hilibka lo’da, digirta, qudaarta cagaaran, badarka ay birta ku badan tahay iyo ukunta.
cuntooyinka hodanka ku ah Omega 3 sida kalluunka Salmon, Mackerel, Tuna iyo lowska.
cuntooyinka hodanka ku ah borotiinta sida ukunta, hilibka iyo cunto badeedka.
Sidoo kale waxaad hubisaa inaad cabto biyo aad u badan maalin walba.
7. Dhakhtar U Tag Oo Isa Soo Baadh
Marka laga soo tago inaad dhaxal ku heli karto, waxaa jira xanuuno kale oo sababi kara inay timaha kaa daataan.
Xanuunada soo socda ayaa sababi kara inay timaha kaa daataan:
lichen planus (cudur ku dhaca maqaarka)
scalp psoriasis (cudurka maqaarka madaxa ku dhaca oo keena in madaxa la xoqo)
alopecia areata (cudur maqaarka ku dhaca oo keena timo daadasho)
thyroid conditions (xanuunada qanjirka)
Haddii aad qabto qaar ka mid ah xanuunadaas ama aad isku aragto calaamado kale oo ay dheer tahay timo daadasho, waa inaad u tagtaa dhakhtarkaaga oo aad hesho daaweynta aad u baahan tahay.
8. Walwalka iska yaree
Walwalka ama walaaca saameyn weyn ayuu ku yeeshaa jirka oo ay ka mid tahay timaha. Timo daadashada waxaa keeni kara inaad ku nooshahay nolol walwal iyo walaac leh.
Sida lagu yareeyo walwalka iyo walaaca:
samee jimicsi joogta ah
Xiriir la samee dadka noloshaada farxad geliya
In hurdo kugu filan aad hesho ayaa iyadana muhiim ah
9. Saliido kala duwan
Daraasad ayaa lagu ogaaday in saliida nacnaca (mint) inay gacan ka geysato timaha oo kobca. Saliida laga sameeyo Rosemary ayaa iyadana dhaqan ahaan loo adeegsadaa daawada bidaarta iyo inay kordhiso wareega dhiiga ee madaxa.
Caleenta la shiido ee Rosemary ayaa sidoo kale baaris lagu ogaaday inay horumariso kobaca timaha, waxaa lagu baaray dooli.
Saliida qumbaha iyo saliida seytuunta ayaa iyadana si weyn loogula taliyaa dadka doonaya inay la dagaalamaan timaha ka daadanaya, laakiin wax baaris ah lagama sameynin faa’idada ay u leeyihiin kobaca timaha.
Biotin waa fitamiin laga helo cunooyinka dabiiciga ah sida:
Baaris la sameeyay ayaa sheegeysa in qaadashada kaniiniga laga sameeyay fitamiinka Biotin inay yareyso timo daadashada oo ay noqon karto daawada bidaarta, laakiin baaritsa inteeda badan waxaa lagu sameeyay dumar.
12. Cabitaanka Basasha
Daraasad hore oo la sameeyay oo aad halkaan ka akhrisan karto ayaa soo bandhigeysa in isticmaalka cabitaan laga sameeyay basasha inay gacan weyn ka geysatay timaha oo dib u soo baxa.
13. Shaaha cagaaran (Green tea)
Shaaha cagaaran waxaa isna loo adeegsadaa in looga hortago timaha oo daata.
Dooli ayaa lagu tijaabiyay in shaaha cagaaran uu qeyb libaax leh ka qaato timaha oo dib u soo baxa laakiin baaris la mid ah laguma sameynin bani’aadamka.
Ubaxa Hibiscus oo meelo badan oo dunida ka baxa gaar ahaan India ayaa loo adeegsadaa kobaca timaha.